စောင့်ကြည့်ရုံမျှ | ZAYYA
ရာဘီယာသခင်မ : On sufism. →
ဒါ့ကြောင့် အရေးပါဆုံး က စောင့်ကြည့်နေ ရုံမျှ အဖြစ် ရှိနေဖို့။ စောင့်ကြည့်တဲ့ အလုပ် ကို မမေ့လျော့ ခဲ့ဖို့ပဲ လို့ ဆိုပါမယ်။ ဆက်ကာ — ဆက်ကာ — စောင့် ကြည့်နေပါ။ ဘယ်အကြောင်းနဲ့မှ စိတ်ပျက် စရာ မလိုဘူးရယ်။ ထပ်ကာ ထပ်ကာ စောင့်ကြည့်မှု သတိ စိတ်စိတ် ပိုင် နိုင် လာ တဲ့ အခါ — အစောင့်ကြည့် ခံ ဘယ် အရာမှ မတွေ့ ရတော့ ဘူးပဲ။ သူ့ နေရာမှာ- စောင့်ကြည့်မှု သတိ အသိ သက်သက်သာ ကျန်ရစ် ခဲ့ တယ်။ နောက်ဆုံး အဲ့ဒီ စောင့်ကြည့်မှု အသိ၊ သတိ ကိုယ်တိုင် ကလည်း အစောင့်ကြည့် ခံ အရာ ဖြစ် သွားပါ တယ်။
Observer itself becomes the observed ! စောင့်ကြည့်သူ ကိုယ်တိုင်က အစောင့်ကြည့် ခံ ဖြစ်လာပြီးတဲ့ နောက် မကြာခင်၊ မိမိ သန္တာန် မှာ အပြောင်းအလဲ တစ်ခု ဘွားခနဲ ကြုံရ ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆို ပြည့်စုံပြီရယ် -။